Haitỳ : Fahasamihafan'ny versiona roa - Wikipedia
Haitỳ : Fahasamihafan'ny versiona roa
Endrik'io pejy io tamin'ny 6 Desambra 2021 à 13:03
16 octets ajoutés , il y a 1 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 6 Desambra 2021 à 10:50 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 6 Desambra 2021 à 13:03 (hanova) (esory)
I '''Haitỳ''', na '''Repoblikan' i Haitỳ''', dia firenena ao [[Amerika Afovoany]], ao amin' ireo nosy [[Antilia]]. I [[Port-au-Prince]] no renivohiny. Mirefy 27&nbsp;750&nbsp;km² ny velaran-taniny ary nisy mponina miisa 11&nbsp;067&nbsp;777 tao tamin' ny taona 2020.
Ao amin' ny ampahany andrefana amin' ny [[nosy HaityHaiti]] (na Hispaniola) no misy ity firenena ity, ao amin' ny iray ampahatelon' izany nosy izany. Ny ampahany sisa dia an' ny [[Repoblika Dôminikana]].
Anjakan' ny tendrombohitra ny vohon' ny tanin' i Haity, ary [[toetanin-jana-pehin-tany]] ny toetaniny. Ao amin' ny tapany atsimony no misy [[morontsiraka]] ao amin' ny [[Ranomasina Karaîba]]. Lasibatry ny [[rivodoza]] matetika ity faritra atsimo ity.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/1041180"